Hagaajinta sawir googlemaps oo leh Arcmap - Gofumed
Hagaajinta sawir Googlemap oo leh Arcmap
Disember, 2007 ArcGIS-ESRI, Google Earth / Maps
Ka hor inta aanan isticmaalin wax yar, waxaan ka hadlaynaa sawirrada jilidda ama khariidadaha isticmaalaya manifold, Autocad y Microstation.
Si loo dhamaystiro wareegga, la qabsiga ArcGIS, waxaan soo helay qoraal ah Adriano, oo na tusaya tallaabada xigta ee tallaabo.
Tani waa aragtida ku jirta khariidadaha Google, xaalad map.
Si aad u aragto orthophoto, doorashada "satellite" dooro
Dabadeed sawirkan waxaa lagu soo rogaa "sawirro", oo geesaha ayaa laga saaraa, sidaa darteed aragtida iyo aragtida qalabka dhismaha ma muuqdaan. (boostada kale waxay muujineysaa sida loo sameeyo haddii haddii aad leedahay isku-duwidda ama xakamaynta dhibcaha)
Kadibna waxaa lagu dhejiyaa Arcmap, iyada oo loo marayo ikhtiyaarka "xogta macluumaadka", waxaa la saadaalinayaa in aanu leenahay fasal muuqaal ah, oo leh dariiqa wadada ee isla aagga. Tan iyo markii aad soo gasho sawirka ma naqaan meeshii ay tahay, waxaad xaq u leedahay inaad gujiso oo aad dooratid "zoom to the layer", sidaas darteed waxaa laga helayaa shaashaddaada.
Dhaqaajiso ah "georeferencing" option via View / Toolbars / georeferencing. Si aad u soo map ama ay gacanta ku dhibcood ku dari kartaa mid ka mid ah la dhibic ka soo jeedo oo la arki karo on aad u socoto screen ah, tani keeni doontaa si aad u bilowdo ka "miiska link" Doorashadan waxaa ka arki kartaa, inaad "isha" isku mid ah iyo in aad ku dar caga loo yaqaan "khariidada" aad mid ka mid ah Pontos ogaan iyo image waxay noqon doontaa meel u dhow degaanka oo xiiso leh.
Marka labadaba sawirka iyo lakabka wadada labadaba waa la arki karaa, meelaha xakamaynta ah ayaa lagu qeexay; waayo waxaad taa kaliya ku dhufaneysaa dhibka (tarjumay) ee sawirkii iyo mid kale guji barta khariidada ee khariidada.
Kuwani waxay noqon karaan in file txt ah, oo waxay galeen iyada oo "load" button laakiin in aad iyaga leeyihiin qaab meel-soocay foomka 'tiro dhibic' 'Asal dhererka' 'asal loolka' 'dhererka caga' caga lool ".
Booska «Fiiri miiska xiriirka» waxaad arki kartaa mid kasta oo ka mid ah qodobbada xakamaynta, sida ku xusan xogta aad haysatid, waxaad ku dari kartaa kugu filan si sawirku u egyahay sida ugu dhow ee suurtogalka ah qaabka waddooyinka.
Ka dib markii sawirku soo gooyo isbeddelka "georeferencing / cusbooneysiinta joornaalka" ayaa lagu dabaqayaa.
Sida habboon, waxa dhoofiyo format ah in waligiiba georeferencing, waayo, click xaq on image ah, ka dibna xogta xogta / dhoofinta iyo formatting, kaas oo lagu IMG karo, tiff ama Roobka ... xataa leben la doortay waxaa loo sameeyey.
Halkan waxaad ka arki kartaa boostada oo dhan
Post Previous«Previous Ku saabsan Paperspace
Post Next Scripts for Calculations ComplexNext »
15 Jawaab in "Georefer map khariidado leh Arcmap"
Elizabeth isagu wuxuu leeyahay:
holaaa ... waxaan ahay xiiso this topic georeferenciar..pero q Waxaan jeclaan lahaa in aad ku sameeyey google earth..porfa iyo 9.2 argis ah ... mar arkay mahrajaan of images q lahaa georeferences ..todas aad ahaayeen in google earth..gracias by todoo ... !!!
Leonardo guera isagu wuxuu leeyahay:
Sideen u sameeyaa badbaadiyaha meesha koorsooyinka la baro?
Xavier Rosales isagu wuxuu leeyahay:
Waa goob weyn, waxaan rajeynayaa inaan iskaashi la sameeyo markaan awoodo, sii soco
Laga soo bilaabo halkaas waad ka beddeli kartaa ballaca iyo dhererka, kuwa aan saaray waa tusaalooyin, cabbirradaas had iyo jeer waxay ku jiraan pixels
waxaad sidoo kale bedeshaa faylka url
Waa inaad ku keydisaa fiidiyowga meel cayiman oo websaydh ah, si aad u haysatid cinwaanka url-ka faylka. Kadibna waxaad galineysaa koodh HTML ah oo fudud inaad ku dhejiso fiidiyowga sida:
<UJEEDDO width = "450" height = "350"> <socosho SRC = http: // nooca file url = "codsiga / x-shockwave-flash" width = "450" height = "250"> </ socosho> </ object>
fiidiyoowgu waa shakhsi ahaan waxaanan rabaa inaan u muujiyo asxaabtooda qaar
Waxaan doonayaa inaan ogaado sida aan kuugu dari karno fiidiyoo loogu talagalay astaanta shaqada
falibeth isagu wuxuu leeyahay:
Hello qof ka odhan kari waayeen sida uu u xalin georeferenciacion ah? Waan ku isku dayay oo taasna waxaa lagu ma ku daray image ah, tallaabooyinka haray aan caddayn, sidoo kale in image afraad toolbar ah in sida muuqata waxaa loo isticmaalaa iyo waxa aan la soo bandhigay.
Waad mahadsantahay ....
Sebtembar, 2008 at
Hello, WE LABADA Pena aad dhibaato, laakiin dhab ahaantii waxaan xiiso ii aad u badan georeference image ah.
WAXAAD KA HELI KARTAA QAYBTA IYO WAX KA BILAABSAN WAX KASTA Mahadsanid
»Si aad ugu soo dhajiso khariiddada ama barta koontaroolka ee aad ku dari karto mid, oo leh dhibic asal ahaan iyo halkaad u socoto shaashaddaada, tani waxay sameyn doontaa firfircoonaanta" miiska iskuxiraha "ikhtiyaarka aad arki karto, ka tagto isla“ isha ”oo ku dar meesha la aado ee loo yaqaan "khariidad" mid ka mid ah meelaha aad ogtahay, sidaa darteed sawirka wuxuu ku dhowaan doonaa meesha xiisaha leh. »
Waxaad sameysataa shaashadda daabacaadda, ka dibna ku dhejisid Mspaint, halkaa waxaad ka gooyey waxa aanad ku mashquulsaneyn oo aad u kaydinayso jpg oo ku yaal dariiqaaga adag.
Markaa waxaad uga soo waceysaa Arcmap, oo leh isla "isugeyn" badhanka sida aad ugu yeeri laheyd qaab, oo ka doorta sawirka meeshii aad ku keydisay.
waxaad iiga sharaxi kartaa talaabada ka dib markaad sameysid sawir gacmeedka, halkaas oo aan ku keydinayo muuqaalka iyo inta uu kudhacayo arcmap?
wuxuu ku jiraa «arag / qalab baloog / dhulal-joreferencing»
iskuday in aad raacdo talaabooyinka oo aadan samayn, daaqada georeferta uma muuqato ikhtiyaarka la doortay
Waa hagaag, anigaa iska dhiibaa, ma aanan isku dayin
Hadda oo aad ka hadasho ku saabsan dhoofinta iyo xusuusinta xulashada format ee GRID, IMG ama TIFF .... Sidee baan u dhoofin karaa ECW iyada oo la rakibay plugka Ermapper?
Anigu ma ihi isticmaalaha Arcgis, laakiin maalinta kale ayaa la iga weydiiyay su'aashaas mana aanan ogeyn sida loo sameeyo. Fikradda, Arcgis 'ee habka loo shaqeeyo waxay u muuqataa mid liddi ku ah isticmaalka.